ဂီတလောကရဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုပို - Cele Gabar
အချစ်သီချင်းတွေ၊ အသည်းကွဲ သီချင်း တွေနဲ့ ပရိသတ်ကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ ဂီတလောကရဲ့ အခြေအနေတွကို ” မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ဂီတ လောက ဘယ်အချိန် ထိ တောင့်ခံနိုင်မလဲ ? အဆိုတော်တွေဟာ ဟိုးအရင် က အခွေလေးဘာလေးရောင်းရတော့ အရင်းမကြေရင်တောင် နောက်တစ်ခွေ လုပ်ဖို့ အင်အား ရှိကြတယ်။ ဂီတ မှာ အရေး /အတီး producer /Studio / Mixing / Harmony အစရှိသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖို့ ကို မနည်းကြိုးစားရပါတယ်။ ကျမလဲ လမ်းဘေး မရောက်တာကံကောင်း ထမင်း အငတ်ခံ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ တခြား အနုပညာရှင်တွေ အားလုံးလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အဲ့ကြားထဲ Show ကရတဲ့ ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ရပ်တည်ရကြတယ်ပေါ့။ အခု fb ခေတ် ရောက်လာတော့ ကောင်းတဲ့ အချက်ရှိသလို ဆိုးတဲ့ အချက်က အခွေ ရောင်းအားနည်းလာတယ်။
အဆိုးဆုံးက ပိုက်ဆံ အကုန်ခံရပဲ Online ပေါ်က နားထောင်ကြတဲ့စနစ်ကြောင့် အဆိုတော်တွေ အခွေ ထပ်ထုတ်ဖို့ တော်တော် ကြိုးစားပြင်ဆင်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ အခုလို youtubeက ပိုက်ဆံတွေကို ရမှန်းမသိသေးတုန်းကတော့ သူများတွေက ပျော်ပျော်ကြီး ခိုးယူ သုံးကြပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဝင်ငွေလေးရအောင် Youtube acc လုပ် MV တွေ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံရိုက်ပြီး တင်ခဲ့ပါတယ် ။ဒါတောင် ဆက်ခိုးတဲ့ သူတွေက ခိုးတုန်းပါပဲ။ အဲ့တေ့ာ ကျမတို့ အနုပညာရှင်တွေ ဘယ်လိုဆက်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အနုပညာတွေ ဆက်လုပ်မလဲ။ ဥပဒေ လဲ ကောင်းကောင်း မရှိ မကာကွယ် ပေးနိုင် ( ဂီတအစည်းရုံးကလဲ မလုပ်ပေးနိုင်) ဒီနိုင်ငံမှာ အနုပညာရှင် ဖြစ်ရတာ ကံမကောင်းဘူး။ ကျမ Copy လဲ မဆိုဖူးဘူး ရင်ဘတ်ထဲက တကယ် အစစ်အမှန်တွေကို သာ ရေးသား သီဆို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လို အနုပညာတွေကို ကိုယ့်ဘာသာတောင် ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ နေရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ ထိုင်းကို ဘယ် လိုသွားပြီး တရားစွဲမလဲ ကျမ တို့လဲ ကြာလေ ကြာလေ အနုပညာ အလုပ်ကို ချစ်လို့သာ လုပ်တာ ဘယ်လိုရေရှည်ဆက်ရပ်တည်မလဲ? ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက အနုပညာကို ခိုးသုံးသူတွေ တစ်နေ့ သင်တို့ပိုင်ဆိုင်သမျှ သူများခိုးယူသွားကြပါစေ။ ( မခံနိုင်လွန်းလို့ရေးတာပါ)” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ ခိုးကူးသမားတွေနဲ့ Online ပေါ်က နားထောင်ကြတဲ့စနစ်ကြောင့် အဆိုတော်တွေ အခွေ ထပ်ထုတ်ဖို့ တော်တော် ကြိုးစားပြင်ဆင်ကြနေရပါတယ်တဲ့။ ပရိသတ်ကြီး ပိုပိုဟာ အနုပညာ အလုပ်ကို ချစ်လို့သာ လုပ်တာ ဘယ်လိုရေရှည်ဆက်ရပ်တည်မလဲတဲ့နော်။
Previous post ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အေးမြဖြူရဲ့ “လွမ်းနေလို့” သီချင်းလေး
Next post ပရိသတ်တွေသဘောကျနေခဲ့တဲ့ နေလင်းကျော်ရဲ့ နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက် သီချင်း Cover သီဆိုမှု